वोल्गा सवारीसाधान बोट - घरेलू ओटो उद्योग "AvtoVAZ" को नेता को नाम छ। कम्पनी को निर्माण र उत्पादन समयमा भनिन्थ्यो देखि पहिलो कार, मान्छे प्यार "मुद्रा" भनिन्छ। 1971 मा बिरूवा पुन: नामाकरण भयो र आधिकारिक AvtoVAZ "कार" यात्री कार को उत्पादन को लागि वोल्गा संघ "को रूपमा चिनिन थाले, र निम्न वर्ष कम्पनी सोभियत संघ को 50 औं वार्षिकोत्सव को अतिरिक्त नाम दिइएको थियो। संयंत्र पुनर्गठन "LADA", "ओका", "Niva", "समारा" र "Sputnik" को ब्रान्डहरु अन्तर्गत वाहन उत्पादन अघि। को reorganization, नयाँ पछि ट्रेडमार्क "LADA।" - निसान कार पनि यहाँ उत्पादित गर्दै छन्, र चाँडै विधानसभा लाइन नयाँ Renault ब्रान्ड जानेछन्। विगतमा मुख्यालय, र अब Togliatti शहर छ। कम्पनी नियन्त्रण बाहिर वहन औद्योगिक सम्बन्ध निसान-रेनल्ट।
देर 60s मा सोभियत संघ को नेतृत्व, यो कि GAZ र AZLK को उत्पादनहरु अन्तर्राष्ट्रिय ईन्जिनियरिङ् मापदण्डको छैन स्पष्ट भयो। साइटहरु को एक नम्बर विचार गरेपछि यो उत्पादन कार लागि Togliatti उद्यम मा निर्माण गर्न निर्णय भएको छ। यसरी परियोजना वोल्गा ओटोमोबाइल प्लान्ट जन्म भएको थियो। इतिहास आफ्नो इटालियन चासो फिएट विशेषज्ञहरु थाले। को वोल्गा सवारीसाधान बोट को निर्माण 1967 मा शुरू भयो, र सबै-संघ Komsomol भवन घोषणा भएको थियो। देश भर देखि जवान हजारौं यस्तो महत्वपूर्ण घटना लागि भेला भए। कम्पनी2वर्ष मा निर्मित गरिएको छ। 1969 मा, अझै पनि उपकरण स्थापना, टोलीमा को गठन, ज्यादातर को बोट निर्माण गर्ने मान्छे देखि को चरण मा। विश्वभरिबाट 800 भन्दा बढी कम्पनीहरु बोट सुसज्जित गर्न आफ्नो उत्पादन आपूर्ति गर्न।
पहिलो कार "Zhiguli" को उद्यम बेनिटो Guido Savoini 19 अप्रिल, 1970 को विधानसभा लाइन प्रमुख प्रशिक्षक बन्द राखिएको थियो। यसरी उनको जीवन Togliatti मा वोल्गा सवारीसाधान बोट थाले। वास्तवमा नाम "LADA" अझै अवस्थित छैन, "मुद्रा" आधिकारिक VAZ-2101 भनिन्छ। र जो भनिन्थ्यो - "रूसी फिएट।" वास्तवमा "मुद्रा" दोस्रो लोकप्रिय नाम थियो र यो 'VAZ-2101 पहिले नै उत्पादन बाहिर निकालिएको छ जब 90 को दशक, मा देखियो। विशेष गरी सोभियत संघ चासो को निर्यात संस्करण - को प्रोटोटाइप कार फिएट 124R थियो। कुल, संरचना परिवर्तन 8 भन्दा बढी सयौं, माथि स्थिति लिएको छ इन्जिन सापट को वितरण, कम स्ट्रोक सहित थियो जमीन अवकास वृद्धि, अगाडि निलम्बन परिवर्तन, इन्जिन छोटो स्ट्रोक रूपान्तरित र अन्य अपग्रेड खर्च गरिएको छ। तर राम्रो अनुभव भएको सोभियत संघ मा फिएट द्वारा अधिक लिइएको छ कि लाग्छ छैन। बुल्गारिया र पोल्याण्ड मा स्पेनी सीट र टर्की "Tofaş S.k." विकास एक मोडेल आधारित लाइसेन्स विकल्पहरू जारी।
सबै भन्दा लोकप्रिय मोडेल VAZ
वर्षौंदेखि यो वोल्गा ओटोमोबाइल प्लान्ट कार को धेरै संस्करण जारी गरेको छ। तिनीहरू सबै सफल थिए, तर केही मोडेल अत्यधिक उपभोक्ताहरु द्वारा सराहना गरिएको छ। "Kopeika" चाँडै लोकप्रियता धन्यवाद राम्रो प्राविधिक मापदण्डहरू गर्न पाउनु, र अपेक्षाकृत सस्तो मूल्य। लामो समय बजार मा यो आला लिन लागि पहिलो गाडी उद्यम VAZ-2102 उत्तिकै सफल भएको थियो। निम्न मोडेल उच्च लोकप्रियता आनन्द छैन, तर 76 वर्ष को संशोधन - VAZ-2106 - सायद सम्पूर्ण मिसिन "LADA" लाइन को सबै भन्दा राम्रो थियो। त्यो घरेलू सडक लागि प्राविधिक एकाइहरु र आदर्श मापदण्डहरू थियो। अर्को सबै भन्दा राम्रो कार प्रारम्भिक 80s देखि कम्पनी मा उत्पादन गर्न थाले जो "Niva", थियो। यो सोभियत विदेश संघ द्वारा निर्यात ठूलो परिमाणमा मात्र कार छ कि टिप्पण लायक छ। मा 84th बन्द रोल्ड को VAZ-2108 अगाडिको पाङ्ग्रा ड्राइव संग "समारा", जो घरेलू बजार मा एक furor सिर्जना गरियो। को 87th वोल्गा सवारीसाधान बोट अझै पनि केही घरेलू कार बनाउन जो आधारमा प्रसिद्ध "नौ" उत्पादित।
"AvtoVAZ" को नयाँ ब्रान्ड
को वोल्गा ओटोमोबाइल प्लान्ट को "AvtoVAZ" थियो पछि, कार को एक नयाँ ब्रान्ड कम्पनी मा विकसित गरिएको छ। LADA-110 को पायलट उत्पादन 1995 मा शुरू भयो। यो यस्तो नवाचारै पहिलो रूपमा प्रयोग गरेका थिए airbag, को इंजेक्शन विद्युतीय प्रणाली, चिपके ग्लास र वैश्विक मोटर वाहन उद्योग को अन्य उपलब्धिहरू। पछि, त्यो ओपल इन्जिन एक मोडेल सहित धेरै संशोधनहरू गरेकोले। LADA उत्पादन बजार द्वारा सुरु भएको थियो, र उपभोक्ताहरु सस्तो र सरल कार को दयनीय आवश्यकता हो।
स्वचालित प्रसारण संग घरेलू कार
डिसेम्बर 2013 मा अन्तिम कार LADA-समारा बन्द रोल्ड। आज JSC "AvtoVAZ" नयाँ ब्रान्ड LADA-Granta उत्पादन गर्छ। यसको मुख्य सुधार गर्ने थियो स्वचालित प्रसारण। रूसी कार उद्योग को लागि - यो एक वास्तविक नवीनता छ। "पालकी" - मोडेल मात्र एक संस्करणमा टाढा जान्छ किनभने यसको कस्तो भाग्य हुनेछ, अझै पनि अज्ञात छ। तर कार घरेलू मोटर चालकहरुलाई मा एक सफलता र रूसी संघ को पुरा क्षेत्रमा राम्रो तरिकाले बेच पहिले देखि नै छ।
पोर्टल धुरों: उपकरण र को नियुक्ति
"किया ओप्टिमा": प्राविधिक विनिर्देशों र मोडेल को विवरण
Ferodo पैड: समीक्षा र विवरण
सुविधाहरू ओडेसा मा एक ट्याक्सी चालक रूपमा काम गर्छ।
ड्रेस कोड "काकटेल": मूल नियमहरू
विवाह टङ्ग्सटेन रिङ: फोटो, समीक्षा
अनुभव मामिला: के रूसी लोट्टो मा 90 नम्बर संग बैरल को नाम हो। बिंगो को खेल को नियम
हाइड्रोलिक तेल को सुविधाहरू। तिनीहरूलाई कसरी चयन गर्ने?
शहर बाल क्लिनिक नम्बर 58, डाक्टर गर्न Strogino सञ्चालन समय र रेकर्ड। मास्को स्वास्थ्य विभाग